စကားပြေတချို့ | အမှတ်တမဲ့.....နှင်း....
You are currently browsing the category archive for the ‘စကားပြေတချို့’ category.
August 12, 2009 in စကားပြေတချို့ | Tags: နေ့များ |5comments
July 24, 2009 in စကားပြေတချို့ | Tags: ညီမလေး | Leaveacomment
မိုးညဟာ တိတ်ဆိတ်နေတယ်။ ကြယ်စင်တွေ တချို့တ၀က်လင်းမြ ….
တချို့အလင်းပြယ်လို့ ။ သန်းခေါင်ယံဟာ အမှောင်ကို ဝေနေအောင် ပန်ဆင်ထားတယ် ။
ခုချိန်ဆို နင်တစ်ယောက်အိပ်စက်ပျော်မောနေလောက်ပြီလား ။ ဒါမှမဟုတ် များပြားလွန်းလှတဲ့ ဆေးပညာဘာသာရပ်တွေမှာ ခေါင်းမဖော်နုိုင်အောင် အလုပ်ရှုပ်နေမှာလား ။ သေချာတာကတော့ ငါအရမ်းလွမ်းနေခဲ့ပါတယ် ညီမလေးရယ် …. ငါ့ရဲ့ဝေဒနာကို ပျောက်ကင်းအောင် ကုစားပေးဖို့ရာ နင့်ရဲ့ကျောင်းတော်ကြီးက မသင်ကြားပေးခဲ့ဘူးတဲ့လား ။
နင်မရှိတဲ့နောက် အရာရာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ပျောက်ဆုံးခဲ့ရပြီ ။ ငါ့အဖို့ အရာရာဟာ အသက်မဲ့စွာ …. ခြောက်သွေ့တိတ်ဆိတ်စွာ…. ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမကြီးပေါ်မှာလည်း ငါတစ်ယောက်တည်း မလျှောက်ချင်တော့ပါဘူးကွယ်။ နှစ်ယောက်အတူတူထိုင်ခဲ့တဲ့ ကော်ဖီဆိုင်မှာလည်း ကော်ဖီနှစ်ခွက်ဟာ သွေးပျက်ဖွယ်ရာ တိတ်ဆိတ်အေးစက်လို့ …. နာကျင်ခြင်းများစွာနဲ့ ငါဟာ နာကျင် …. အထီးကျန်မှုများစွာနဲ့ ငါဟာအထီးကျန်လို့ …. ကျားနာတစ်ကောင်လို ငါဟာ သွေးရူးသွေးတန်း လွမ်းဆွတ်နေခဲ့ပါတယ် ညီမလေးရယ် ။
သူရူးတစ်ယောက်လို လေလွင့်လို့ ….ကြွေသွားတဲ့ကြယ်တွေကို ငေးမောနာကျင်လို့ ….
တစ်ချိန်က မိုးရာသီနေ့ရက်တွေ ရောက်ရှိမလာခင် ပူနွေးတဲ့ နေရောင်ခြည်ရဲ့အောက် ငါ့ရင်ဘတ်ထဲမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ ပန်းလိုပွင့်ဖူးခဲ့တယ် ။ ငါ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ငါချစ်ရတဲ့ ညီမလေးနင်ဟာ တိတ်တိတ်ကလေး ကြည်နူးငြိမ်သက်နေခဲ့ဘူးတယ် ။ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဆိုပေမယ့် အရာရာဟာ မနေ့တစ်နေ့ကလို … ငါ့အတွက် ဘယ်တော့မှ အဆုံးသတ်မှာ မဟုတ်တဲ့ ဒဏ္ဍာရီပြဇာတ်တစ်ပုဒ်လို … တကယ်ဆို ဘာကိုမှ မမျှော်လင့်စွာ ငါသက်ဝင်ချစ်ခင်ခဲ့ပါတယ် ညီမလေးရယ် ။ ငါ့ဘ၀ရဲ့ အမှောင် ၊ အလင်း ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ … အားလုံးဟာ နင့်တစ်ယောက်သာ ရည်ရွယ်ကြောင်း ငါ့နှလုံးသွေးနဲ့ ရင်းပြီး သစ္စာပြုမယ် ။ ငါ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ နင့်အပေါ် ဦးဆွေးဆံမြည့် စောင့်သိရိုသေမယ်။ နင်နဲ့ပတ်သတ်ခဲ့သမျှအရာရာ ငါဟာ လေးနက်ယုံကြည်စွာ ချစ်ခဲ့ကြောင်း ဒီမြေဒီကမ္ဘာကို နာကျင်စွာ တိုင်တည်ခဲ့ပါတယ် ။
ငါ့မျက်ရည်နဲ့ ခင်းတဲ့လမ်းဆိုလည်း …..
ကြည်နူးချမ်းမြေ့ပါစေတော့ကွယ် …… ။ ။
၂၀၀၉ ၊ ဧပြီ။